sekoly - ALinks
Lahatsoratra momba ny sekoly
Ny rafitry ny sekoly sy ny fampianarana any Canada
Desambra 26, 2020 Antika Kumari Kanada, am-pianarana
Kanada dia iray amin'ireo firenena nahita fianarana tsara indrindra eto an-tany. Tamin'ny taona 2015, 90% amin'ny olona any Kanada izay 25 ka hatramin'ny 64 no nahavita ny lise, ary ny 66% no nahazo ny fampianarana aorian'ny fanabeazana. Ny rafi-pampianarana
Rafitra fampianarana sy sekoly any Chine
Enga anie 19, 2020 Antika Kumari Shina, am-pianarana
Chine, fantatra amin'ny hoe Repoblikan'i Chine, firenena any Azia Atsinanana. I China dia manana mponina betsaka indrindra eto an-tany sy firenena fahefatra lehibe indrindra. Ny rafi-pampianarana amin'ity firenena ity koa dia ao amin'ny iray amin'ireo firenena ambony indrindra. Standard
Rafi-pianarana any Malezia
Aprily 3, 2020 Antika Kumari Malezia, am-pianarana
Raha hifindra any Malezia miaraka amin'ny fianakavianao ianao. Amin'izay dia ny fanabeazana ny zanakao no tena ahinao. Saingy, ny rafi-pampianarana any Malezia dia manana fenitra avo lenta. Ary koa, ny ray aman-dreny taloha rehetra dia tsy niady mafy
Fianarana sy fanabeazana any Etazonia
Aprily 1, 2020 Shubham Sharma am-pianarana, USA
Etazonia dia be mponina. Manana fanjakana 50 izy io. Ny Etazonia koa dia firenena tsara kokoa ary tsara indrindra hiasa, satria manana ny orinasa malaza indrindra eto an-tany. Raha misy
March 6, 2020 Karuna Chandna Palestina, am-pianarana, fianarana
Rafi-pampianarana- Ny rafi-pampianarana any Palestina dia tantanan'ny Ministeran'ny Palestiniana. Eto dia matetika nozaraina ho lahy sy vavy ny sekoly. sy sekoly sekoly fanabeazana. Ny fisoratana anarana dia avo 80% eo ho eo. Tena avo be ihany koa ny tahan'ny fahaizana mamaky teny sy manoratra. Sekoly miorina
Rafi-pampianarana: Congo demaokratika
March 5, 2020 Karuna Chandna DR Kongo, am-pianarana
Kongo Demokratika dia firenena 342,000 7 kilometatra toradroa any Afrika Equatoriale. Ny isam-poniny dia maherin'ny 12.6 tapitrisa. Manodidina ny 40% amin'ny tetibola kongoley no lany amin'ny rafitry ny fampianarana. 31% amin'ny fampianarana ambaratonga voalohany, 27% amin'ny ambaratonga faharoa ary XNUMX% amin'ny ambaratonga fahatelo. ary
Torolàlana momba ny fanabeazana rosiana
March 1, 2020 Maitri Jha Rosia, am-pianarana
Russia dia toerana honenana tsara ary raha mifindra any Russia ianao fa tsy tokony hiasa saina momba ny fanabeazana sy ny fianaran'ny zanakao. Ny rafi-panabeazana rosiana dia mizara ho fizarana telo dia ny fanabeazana prasekola sy ambaratonga voalohany ary fampianarana ambaratonga faharoa.
Fianarana any Iràka: Sekoly Irak
March 1, 2020 Karuna Chandna Irak, am-pianarana, fianarana
Ny rafi-pampianarana Irak dia fehezin'ny governemanta nasionaly Iraqi. Ity fanabeazam-panjakana ity dia omena maimaim-poana manomboka amin'ny Kilonga ka hatramin'ny diplaoma Doctoral. Misy ny toeram-pampianarana tsy miankina ary ny fandaniana amin'ny sekoly dia manintona azy ireo amin'ny ankamaroan'ny olom-pirenena. Ny lehibe
Ny rafitry ny sekoly sy ny fanabeazana any Mexico
Febroary 29, 2020 Antika Kumari Meksika, am-pianarana
Raha mifindra any Mexico miaraka amin'ny fianakavianao ianao, ny fanapahan-kevitra lehibe tsy maintsy atrehinao dia ny fomba hanohizana ny fianaran'ny zanakao. Ny sekoly sy ny rafi-pampianarana any Mexico dia mety tsy manana sekolim-panjakana matanjaka indrindra misy. Fa misy isan-karazany
Rafitra fanabeazana Afghanistan & Lisitry ny sekoly iraisam-pirenena ao Kabul
Febroary 29, 2020 Maitri Jha Afghanistan, am-pianarana
Raha mikasa ny hifindra any Afghanistan miaraka amin'ny ankohonanao ianao dia tsy maintsy mijery ny rafi-pampianarana any Afghanistan. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny rafi-pianarana sy fampianarana any Afghanistan. Afghanistan dia isan'ireo firenena manana ambany indrindra